Leaked WhatsApp CHAT shows Zim woman being disgraced after refusing to give punani for $10 – Makuhwa.co.zw
Leaked WhatsApp CHAT shows Zim woman being disgraced after refusing to give punani for $10
Leaked WhatsApp CHAT shows Zim woman being disgraced after refusing to give punani for $10… Things are hard in Zimbabwe to the point that women are begging for money from men… This man Tom however didn’t want to part with his $10 pasina kuvhura makumbo…. See the chat below…
[10:56, 13/03/2016] Girlie: ndeipi sweetie
[10:57, 13/03/2016] Tom😍: Ndeipi urisei
[10:57, 13/03/2016] Girlie: Hapana mushe.ko ndipowoka ka ten shaaz.zvakapresa
[11:00, 13/03/2016] Tom😍: Good good.u in zim or wakadzokera.ukuda ten rounds😳😳😳
[11:00, 13/03/2016] Girlie: In Zim.ndakatsva ndipowo katen bucks wangu ndibalancise tunhu
[11:27, 13/03/2016] Tom😍: Uri Kupi ndkuone.iwewe ndikakupa katen ukundipa chii?
[11:32, 13/03/2016] Girlie: ummm ingondipawo kani.hanti ndakumbira here
[11:34, 13/03/2016] Tom😍: mari inoshandirwa.ndingangokupa chete.hausi mwana wamai vangu plus hushamwari hwepagroup.ini ndinoisa mari yangu panopinda mboro yangu.
[11:35, 13/03/2016] Girlie: tsek iwe.beche haripuhwe munhu zvekumhanya.gara nezvimari zvako
[11:37, 13/03/2016] Tom😍: ukunditukirei? Ndauya kuinbox kwako here ini.unofunga ungangokumbira mari wototumirwa just becaz uri baby.get away kuda zviri easy kunge honye.mari handikupe.yangu ndoisa pandosvira.ndingakushandira kuti ndikupe mari waitei.pihwa nematsaga ako aunorova mari pawatsapp nezvimafake fotos zvako izvo.usauye kuinbox kwangu futi.
[11:37, 13/03/2016] Girlie: Aiwa I didnt know u r this rough.u pretend to be a nice person mugroup.chete hauna mari.vanayo vanongotipa vakanyarara.newewo dnt talk to me chero pagroup usandimhorese
[11:37, 13/03/2016] Tom😍: get lost.handitaure newe hure.mari ndinayo yangu.ukuda kuipihwa kuti waitei.yangu ndopa avhura gumbo ndikasvira.hausi mwana wamai vangu so don’t talk to me either.actually im blocking u.tsek. hure wakajaidzwa.unofunga ndingashanda mari yekukupa iwewe kuti wageza nyoka.f#ck off
Related Topics:Leaked WhatsApp Chat
Kutenga mota neBeche – SEE how i used my punani to buy my first car
Evil Snake causes CHAOS AT POLICE CHARGE OFFICE